Ulungele ukuba ngumama, nyanga zonke enentliziyo edibeneyo, jonga umgca wokuvavanya, kodwa kusekho umphumo ongenamarha - akukho ukukhulelwa. Uthabatha utshintsho oluthile emzimbeni ngenxa yeempawu zento ophuphayo ngayo, kodwa isorkorki ayifuni ukukuvakashela. Mhlawumbi asimele silinde kwaye sihlupheke, kodwa siqale senze? Emva koko, ukuba ukuzalwa komntwana akunakwenzeka, kunokuhlala kukho isizathu kunye nesisombululo.
Into ephambili ayiyikuyixilonga ngaphambi kwexesha. Kuphela kwi-20% yamatyala imbangela yokungakhulelwa kukungabikho kwengqondo. Kwaye ke, uninzi lwezi zifo luya kunyangwa. Ngamanye amaxesha kuyimfuneko nje ukuba utshintshe ezinye iinkalo zobomi, ukufaka umzamo omncinci - kwaye iphupha liya kuba yinyani.
Ukuxinezeleka kukuphazamisa ukukhulelwa
Uyacaphuka, ungalali kakuhle? Ingaba unesidlo, okanye udla ezimbini? Kwaye emehlweni omfazi onesisu esiswini, iinyembezi zomona ziza emehlweni akho ... Ubunzima bokuqala kokukhulelwa kunokubangela ukudakumba. Kananjalo, ngokukhawuleza, iyakunqanda i-ovulation. Akumangalisi ukuba abantu abaninzi abanamava bacebisa ngelithi: "Cinga ucinge ngokukhulelwa, ungaxhomeki kuyo-kuya kuza." Le nkcazo ayinasisiseko, kodwa ukufunda "ukungacingi" akulula. Kukho iindlela ezizodwa, unyango lwamaqela, unokhenketho kwiinkonzo zengqondo. Kodwa into elula kakhulu ekhupha iingcamango ezimbi yimidlalo. Yenza into, umzekelo, ukubhukuda. Oku kuya kunceda nje kuphela ukukhusela iingxaki, kodwa kwakhona ubuyisele imali ye-hormonal balance.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba, ngoogqirha, umfazi onyumba ukhulelwa kungekudala emva kokufumana umntwana. Lo mzekelo ubonisa indlela i-psyche echaphazela ngayo ukuzala. Konke kuxhomekeke kwimeko yangaphakathi kunye nomoya. Eli bhinqa, elithatha umntwana, sele liba ngumama, lancinci, layeka ukuzitshutshisa ngengcamango yokungabikho. Kwaye kwazalwa umntwana.
Cinga kwakhona ukutya kwakho
Imenyu yabazali bexesha elizayo kufuneka ihluke, ukusuka ekutya okucebileyo kumavithamini kunye nezinto ezilandelwayo. Utshaba oluphambili lokukhulelwa ngumfuyo, okanye ifomati yemifuno eguquliwe. Gcina ii-hamburgers, iifrithi zaseFransi, ii-potato chips kunye neentlobo ezahlukeneyo zekiki. Ukugqithiselela kwabo kungabangela ukuphulwa ekusebenzeni kwamalungu amaninzi, kuquka abo bajongene nokuthi ukukhulelwa akukwenzeka.
Ukongeza, ii-trans zenza ukuba uzuze ubunzima kunye nobunzima obuninzi, okwenza ukuba akunakwenzeka ukuba ukhulelwe. Kwakhona imeko efanayo xa ubunzima buphantsi. Ngokuphathelele ikofi kunye neyeyi, ngoko kwiinkompo ezimbalwa ngosuku akunakwenzeka ukuba usongele umsebenzi wakho wokuzala. Kodwa utywala kufuneka kushiywe ngokupheleleyo. Yena kunye nalabo abangenayo ingxaki kubafazi besisu banokuba yingozi, kodwa kubonakala ngathi, ukuzalwa akunakwenzeka, kungcono ukuthetha naye.
Umonde ngakumbi kwigumbi lokulala
Uziva unetyala, ngenxa yokuba ungaphantsi kwaye ungaphantsi kocansini, ngokuqhelekileyo awufuni ubuhlobo obusondeleyo, ubulili buyeke ukukunceda. Enyanisweni, ukukhulelwa okuphumelelayo, isondo rhoqo siba ngumqobo. Ngokuqhelekileyo umntu ulala ngesondo, ingaphantsi kwengxube ye-spermatozoa kwi-fluid yayo. Umgangatho wesininzi uphathwe kakhulu. Efanelekileyo - nganye intsuku ezimbini. Ngekho rhoqo, kodwa kuninzi kangangoko, ukuze "ungaphambuki".
Ngokuqhelekileyo, ukuba ubomi bobulili buhlelwe ngokuchanekileyo, ukukhulelwa kwenzeka ezinyangeni ezintandathu. Kwaye ukuxilongwa ngokubanzi kunokufakwa kuphela emva komnyaka wobomi obusondeleyo.
Yazi iintsuku zakho ezivundileyo
Ukuba ukukhulelwa kungekhona ixesha elingaphezu kweenyanga ezintathu, isizathu kunye nesisombululo siyafumaneka kuwe. Kufuneka uqale ikhalenda yeentsuku ezivundileyo. Yenza ngokukhawuleza, kubala umhla ovuthayo. Oku kwenziwa ngokulinganisa ukushisa komzimba kwansuku zonke. Amanyathelo kufuneka ayenziwe ngexesha elifanayo ngaphambi kokuphuma ebhedeni. Enye indlela yokuqaphela ukuzala kukugcina iimfihlo. Ngethuba le-ovulation, i-mucus yomlomo iyabonakala kwaye ifana nomhlophe weqanda. Eli lonke ixesha limhlophe kwaye li-opaque.
Kwi-pharmacy ungathenga iimvavanyo ezizodwa ezikwazi ukuchaneka ngokuchanekileyo umzuzu we-ovulation. Ukwazi iintsuku ezivumbayo kubaluleke ngakumbi xa ukhetha ixesha elihle lokukhulelwa.
Isizathu sinokuba ngumntu
Umjobi wezinyununu uye wafunda imbali yezigulane zakho zangaphambili kunye nokusebenza, wayejonge iseshingi yokujikeleza kwimihla, wajonga iziphumo zeemvavanyo kunye ne-ultrasound - yonke into ilandelelwe. Ngoko kufuneka uhlolisise iqabane lakho. Ugqirha uya kubhala isilathiso sokuhlalutya kwindoda, thumela kwi-ultrasound. Ngelishwa, iqabane lakho lingavumelani. Unako ukutsho ukuba unempilo yokuba akukho nanye kwintsapho yakhe ... njalo njalo.
Kwindoda eninzi, isigqibo sokwenza uphando luyinkalo enzima. Kwilizwe lethu (kwaye kungekuphela kwimihlaba yethu) kusekho inkohlakalo yokuba ekungabikho kwenzalo, kuphela umfazi onokusola. Kwaye emva koko, ngokwemilinganiselo, ama-40% eengxaki zokungabikho kokukhulelwa zidibene nomgangatho wempilo yomntu!
Ukufundwa komgangatho wobomi kulula, kunokukuqinisekisa ngokulula okanye ukungabandakanyi inkcazo yokungabikho komntu. Kutheni ungenzi oko kunokuba ube ngamaxesha amaninzi kungekho mfuneko yokutyhila ibhinqa kwiimvavanyo ezinzima.
Ukuba emva komnyaka wenzame, ukukhulelwa akukwenzeka
Ngokuqhelekileyo kule meko sithetha ngentsholongwane, ekufuneka iphathwe yiingcali zamaziko enyango yokunyanga. Nangona ukuba isikhungo esinjalo sisekude kakhulu, kuyafaneleka ukujika. Ngokuqhelekileyo, ezi klinikhi zixhotyiswe zixhobo zonyango kunye neelabhu ukulungiselela ukuxilongwa kunye nokunyanga. Kungcono ukudibanisa khona kanye kunye neqabane. Izizathu kunye nezigqibo ziya kukubangela apho naziphi na iimeko, nangona ungavumelani nemigaqo ethile.
Ungakhathazeki kwangaphambili. Nangona ukuzalwa komntwana akunakwenzeka, amayeza enamhlanje angakwazi ukujamelana nesisombululo sezona nkxalabo ezibangela ukungabikho. Into eyona nto ongayenzayo ilinde ngonaphakade, kwaye inyanga zonke uyazixhaphaza ngeentembelo kunye nokudumala.
Isaladi yenhliziyo kunye noshiyi otshaya kunye ne-chicory
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 ukusuka kuVasilisa Volodina: Iinqwenkwezi ngenyanga yokuqala yekwindla
I-Alaska pollack kwi-cucumber-nut sauce
Iidyuli zeevengetarian kwitheyibhi yokutya: izitya ezivela kwiziqhamo kunye namantongomNyaka omtsha 2016
Ukuba indoda ifuna ukusondela kumfazi
Yintoni enokuyenza ukuze wenze ubulili kungabi buhlungu?
Ngaba unesli ingaqwalaselwa ukutya okunempilo?
Indlebe yepilisi e-sweet and cod